कसरी आउँछ अबोध बच्चामा अपशब्द ?
रमेश भारती काठमाडौं, ८ चैत
बालबालिका अबोध हुन्छन् । उनीहरूमा जिज्ञासा धेरै हुन्छ । बालबालिकामा जिज्ञासासँगै आवश्यकता र माग पनि धेरै हुन्छन् । उनीहरूका माग प्रायः खेलौना र सामान्य मिठाई, चक्लेट नै हुन्छन् ।
तर, पछिल्लो समय खेलौना र मिठाई, चक्लेटभन्दा फरक छ बालबालिकाको माग । अहिले बालबालिका भिडियो, कार्टुन र युट्युबमा मनोरञ्जनका सामग्री हेर्न रुचाउँछन् अहिलेका बालबालिका । पछिल्लो समय बालबालिकालाई भिडियो, कार्टुन र युट्युबका सामग्री देखाएर अलमल्याउने गरिएको छ । यसको नकारात्मक असर बालबालिका र समाजमा पर्दै छ ।
म धेरै बालबालिकालाई जिस्क्याउने गर्छु । उनीहरूसँग कहिलेकाहीँ समय भएका बेला खेल्ने पनि गरेकोे छु । २ महिना अगाडिदेखि एक बालकको अपशब्द दैनिक बिहान र साँझमा मेरो कानमा गुन्जिन्छ । उनको घर नजिक बस्छु । मैले ती बालकलाई कति पटक मिठाईसमेत किनेर दिन्छु । हेर्दा हँसिलो अनुहार भएका ती बालक त्यस्तो अपशब्द बोल्लान् जस्तो भने देखिँदैनन् ।
ती बालक दिनमा ३ पटक अपशब्द बोल्छन्– खाना खाने बेलामा, विद्यालय जाने समय र उनले मागेका वस्तु नपाउँदा । अबोध बालकसँग अपशब्दको भण्डार नै छ ।
मैले सोचेँ, ‘कहाँबाट यस्तो शब्द सिक्छन् ?’ यो प्रश्नको विषय बन्यो । उनले बोल्न अपशब्द सुन्दा उनमा नकारात्मक शब्दको भण्डार नै छ जस्तो लाग्छ । कि परिवारमा कसैले अपशब्द प्रयोग गर्छन् जस्तो लाग्यो ।
अरू बालबालिका साथीहरूसँग हिँडडुल गर्दा र चिया पसलमा चिया गफ हुँदासमेत अपशब्द बोल्न हिच्किचाउने गर्छन् । ती बालक भने घरका सदस्यसँग समेत प्रत्येक शब्द फोहोरी बोल्छन् । लाग्छ कि उनका अभिभावकहरू पनि अपशब्द बोल्छन् जस्तो तर होइन ।
ती बालकका बुबा सरकारी जागिर र आमा निजी स्कुल पढाउँछिन् । तर, ती बालकको समस्या युट्युबमा कार्टुन हेर्ने बानी रहेछ । उनी कार्टुन हेर्न नपाए मनपरी बोल्न पछि पर्दैनन् । यो उनको बानी नै भइसकेको छ ।
उनी यति नराम्रो शब्द उचारण गर्छन् कि कल्पना गर्नै सकिँदैन । ती बालकको अपशब्द सुन्ने जो कोहीले उनका परिवारमा सभ्य भाषा त कसैले प्रयोग गर्दैनन् कि क्या हो ? भनेर सोच्छन् । तर, त्यस्तो होइन । ती बालकका आमाबुबा नै शिक्षित छन् । उनीहरू राम्रो र सभ्य भाषाले आफ्नो छोरोलाई बोल्न सिकाइरहेका छन् । तर, उनले यस्तो अपशब्द कहाँबाट बोल्न सिक्छन् भन्ने विषयमा उनका बुबाआमा नै चिन्तित छन् ।
उनले अपशब्द बोल्नुको मुख्य कारण भनेको युट्युबमा आउने कार्टुन हो भन्ने अनुमान छ । परिवारले ती बालकलाई कार्टुन हेर्नबाट अलग राख्न खोजिरहेका छन् । तर, उनी कार्टुनबाट टाढा भएर बस्न सक्दैनन् । कार्टुन हेर्न नपाएपछि ती बालक अपशब्द प्रयोग गरेर आमाबुबालाई मुख छाड्न थाल्छन् ।
यसरी मुख छाड्दा पनि आमाबुबाले कुटपिट भने गर्दैनन् । उनले कहाँबाट यस्तो नराम्रो शब्द बोल्न सिक्दै छन् भन्ने विषय नै अहिले परिवारमा चिन्ताको विषय बनेको छ ।
आमाबुबा र परिवारका सदस्यबीच आपसमा तालमेल नहुनु र भाषाको स्तरमा कुनै सन्तुलन नभएर घरमा अपशब्द धेरै उचारण हुनु पनि यसको प्रमुख कारण हो । बालबालिकालाई घरको वातावरण कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारेमा परिवार सचेत हुनुपर्छ ।
आमाबुबाको दायित्व छोराछोरीलाई असल बन्न, मीठो र सही बोल्न सिकाउने पनि हो । छोराछोरीका लागि आमा पहिलो पाठशाला हो भने जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्ति बुबा मानिन्छ ।
बालबालिकाका हकमा विद्यालय र परिवार शान्ति क्षेत्र बनाउन आवश्यक हुन्छ । समाजसँगै अभिभावकहरू एकअर्कालाई सम्मान गर्दैनन्, बालबालिकाहरूको अगाडि नै झगडा गर्छन् । यसको मानसिक असर उनीहरूमा पर्छ । बालबालिकामा पारिवारिक झगडाको क्रममा प्रयोग गर्ने शब्द स्तर अति नै नराम्रो हुन्छ ।
उनीहरू कहिलेकाहीँ अपशब्द पनि बोल्छन् । धेरैजसो एकअर्काका परिवार र आमाबुबाका बारेमा नराम्रो कुरा गर्छन् । त्यस्तै, उनीहरू छुट्टै बस्ने र सम्बन्धविच्छेद गर्नेजस्ता कुराहरू पनि बालबालिकाहरूका अगाडि गर्छन् ।
बालबालिकाको स्वभाव र बानी व्यहोरा सबैले वास्ता गर्छन् । समाजमा अन्य व्यक्तिले बालबालिकाले बोल्ने शब्द सुन्छन् र दिमागमा लिन्छन् । त्यही भएर उनीहरूका आगाडि बोल्दा धेरै ख्याल गर्नुपर्छ । समाजको वातावरणले पनि बालबालिकाको व्यवहार, बोली र आनीबानीमा असर पर्छ ।
प्रविधिको नकारात्मक प्रभाव
बालबालिकाको आनीबानीको विकासमा परिवारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । बालबालिकाले जेजस्तो वातावरण पाएर हुर्किन्छन्, त्यो उनीहरूसँग विकास हुँदै जान्छ । बालबालिकाले परिवार र विद्यालयबाट जुन प्रकारको कुरा र व्यवहार सिक्छन्, उनीहरूले त्यही व्यवहारमा उतार्छन् । कतिपय परिवार र अभिभावकहरूले जानी नजानी गरेका गल्तीको नराम्रो असर बालबालिकामा पर्छ ।
सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिले बालबालिकाहरूलाई एक्लो मात्र बनाएका छैनन्, प्रविधिले विभिन्न पक्षबाट बालबालिकालाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । प्रविधिका कारण बालबालिका परिवारसँग रमाउन र घुलमिलसमेत हुन छाडेका छन् । यो विषय समस्या र चुनौतीका रूपमा समाजमा देखापर्दै छ ।
प्रविधिका कारण बालबालिका विभिन्न खालका रसायनबाट प्रभावित भइरहेका छन् । ती रसायनले उनीहरूको मानसिक विकासमा समेत गहिरो असर गरिरहेको छ । प्रविधि प्रयोगका कारण बालबालिकामा मानसिक विकाससँग जोडिएका विकार अटिज्म, अटेन्सन डेफिसिट हाइपरएक्टिभिटी डिस्अर्डर (एडीएचडी) तथा डाइलेसिया व्यापक हुन थालेको स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धानले औँल्याउन थालेका छन् ।
यसर्थ अब हाम्रा बालकालिकालाई प्रविधिसँग परिचित गराएसँगै प्रविधिको दुरूपयोगबाट बच्न सिकाउने, सचेत गराउने, अनावश्यक समयमा र गलत तरिकाले, जतिबेलै प्रविधिमा झुण्डिइरहने अवस्थाबाट मुक्त गर्ने काम गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।
प्रविधि आजको युगमा अतिआवश्यक पाटो बनेको छ । एक प्रकारले मानिसको जीवनशैली पनि बनिसकेको छ प्रविधि तर प्रविधिलाई साधनका रूपमा मात्र नलिएर साध्य नै ठानियो भने त्यो व्यक्ति र समाजका लागि नै घातक बन्न सक्छ । प्रविधिबाट सकारात्मक कुरा मात्र लिने हो, जीवनशैलीमा सहजीकरण गर्नका लागि मात्र प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो तर हामी जीवनलाई नै बर्बाद पार्न पो प्रविधिलाई प्रयोग गरिरहेका त छैनौँ ? सोच्ने बेला भइसकेको छ ।